Lazovsky Nature Reserve - usitjela Primorsky Krai
Kuyini inqolobane? Le ndawo zemvelo ayifakiwe ngokuphelele yiluphi uhlobo umsebenti wetemnotfo. Umgomo yanoma yiziphi esiqiwini - ukuze alondoloze ifomu engokwemvelo ingcebo yemvelo. Kungaba:
yezimila nezilwane ezihlukahlukene;
namathafa esiyingqayizivele, isib, nasemihumeni, izimpophoma, njll.;
izimo zezulu kwendawo.
Inhloso noma iyiphi esiqiwini - babe lokuma ngalo ungakwazi ukunquma ngokunemba nobuqotho izinqubo ezenzeka esikhathini izinhlelo zemvelo emvelweni, angathintwanga impucuko. Yingakho ngaphansi Okubekiwe babela ezindaweni noma amanzi ne nemiculo iningi izimo endaweni.
Ngokuzingela obhejane ngokungemthetho ezindaweni ezivikelwe - ucezwana lokudla. They jeza baseMpumalanga Ekude futhi alondoloza ocebile ezingavamile futhi esiyigugu izinhlanzi kanye nezindawo zokulondoloza imvelo of eCaucasus, futhi zigcine band phakathi.
Ukuze uvikele endaweni engafani nezinye izinto ezingekho emthethweni, uhulumeni waphasisa umthetho "Ngo Ezivikelwe Ngokukhethekile", lapho, ikakhulukazi, aveza isidingo ukuqaphela izinqolobane inhlangano. Ngokusho kochwepheshe, lokhu kuyonisiza ukuba ukuvikelwa kwalezi zindawo isimo ekhethekile.
Kulondoloza ka Primorye Territory, njengazo zonke ezinye indawo yokuphepha Russian olusungulelwe yesondlo, ukulondolozwa semvelo. Ngo Primorye, lezi reserves eziyisithupha:
Far Eastern Maritime,
Indaba yakhe ibonisa indlela ukukhathalelana ngcono isimo kulezi zindawo ezivikelwe yeRussia.
Lazovsky Nature Reserve - isibonelo okukhulu ukunakekelwa isimo. It yadalwa ngo-1928, kodwa ekuqaleni okwakubizwa ngokuthi reserve South Ussuri Sudzuhinskogo. Le ndawo elisoGwini ridge ka Phendla, esiqashwe onogada eziyisithupha futhi ezimbili (!) Horse umbonisi.
Namuhla Lazovsky Nature Reserve - ezintathu ezamahlathi, inethiwekhi enkulu indawo okwakuvinjwe kuyo, umnyango ayo ucwaningo, uMnyango wezeMfundo kwemvelo, amakhulu abasebenzi. Inhlangano has a base eqinile ngokwezimali, lwemikhumbi enkulu izimoto, siqu imishini yesayensi isifundo kwezinqubo ezingokwemvelo. Reserve umsebenzi - ukuze alondoloze izimila ezingavamile nezilwane ezihlukahlukene esempumalanga Primorye, kuhlanganise nezinhlobo eziyivelakancane kwamahlathi coniferous kanye lezihlahla, izilwane ezisengozini: gorals, izinyamazane nezimanakanaka. Ngo-1970, Lazovsky egicna imvelo owayemuhle wayebizwa ngokuthi LG Kaplanova, umphathi wangaphambili, okwathi ngo-1943 kwabulawa abazingeli abangekho emthethweni bathola.
Isici reserve impumuzo - abalulekile kokuphakama izinguquko, ukusondelana kolwandle. Ukuthi isimo lapho indawo adjoin isiManchu zinhlobo broadleaf isitshalo ejwayelekile ngaphezulu East Asia, kanye nabamele Okhotsk ehlathini flora. Ngaphezu kwalokho, kukhona izinhlobo eziningi eyinqaba emathafeni zone, emaqeleni ngisho ezisondelene nazo. Kuyaphawuleka ukuthi cishe zonke izitshalo - yesibili, okusho ushintsho zibangelwa yizenzo zabantu ...
Noma kunjalo, kwasala eziningi zezinhlanzi sendawo - izitshalo, okuvame ukuhlotshiswa ngayo ezindaweni okuwukuphela kwabo emhlabeni. Lokhu ginseng likhona, uhlobo olukhethekile zokhuni ( "kanzima"), Goryanka krupnochashechkovaya ohlehliswe oki. Zonke ezimila lapha 1212 cishe kwanyamalala ebusweni kwezinhlobo Earth.
Fauna kuhlanganisa abantu, ngawo ngokoqobo eya iyunithi. Ngakho esiqiwini kukhona 14 kuphela amahlosi, gorals kungathi izingalo ezingamakhulu amabili kancane inyamazane nezimanakanaka ngaphezulu.
Ngo Lazovsky reserve hlala izilwane ezingavamile nezinyoni anamagama enhle: Mandarin duck, uklebe Buzzard, Plover Ussuri nabanye.
Igama zinhlobo isinambuzane abahlala esiqiwini, ethuthuke kakhudlwana, ezifana grylloblattidae Dyakonova noma Saturnia Arthemisi.
Lazovsky Nature Reserve - ekhoneni eziyingqayizivele Primorye.
Indlela ukutshala amakhabe - amathiphu isivuno esihle
Kungani dream of a ukhaphethi? Incazelo incazelo
Legends of Eisenwald: ukuhamba
Izwe Exotic leZimbabwe. Inhlokodolobha Harare - muzi ukhombise impilo